Nadaafadda goobaha dabaasha oo soo wanaagsanaatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nadaafadda goobaha dabaasha oo soo wanaagsanaatay
La daabacay fredag 19 juli 2013 kl 13.39
Nadaafadda biyaha goobaha lagu dabaasho oo u soo wanaagsanaaday si aan muddooyin la arag. Waxay hayd sannadkii 1996 markii ugu dambeysey oo biyaha goobaha lagu dabaasho ay sidaan kale nadiif u ahaadaan.
Inta lagu jiro bisha Luulyo oo qorraxdu dhakada saaran tahay, waxay dad badani caadeystaan in ay isku qaboojiyaan biyaha xeebta harada Drevviken oo ku taal degaanka Högarängen oo dhanka koonfurta kaga aaddan Stockholm. Waxaad halkaas ku arkeysaa dhallaan cayaaraya iyo dad waaweyn oo dabaalanaya. Waana wax lagu raaxeysto, laakiin aysan khatari ka maqnayn. Waxay ahayd dhawr sano ka hor markii xeebtaan ay ku soo butaaceen biyo wasakh ah oo ka soo jabay qasabaha wasakhda qaada. Taas oo dad badan u keentay caloo-xanuun.
Kadin markii maamulka degmadu weeciyey qasabadihii wasakhda waxaa soo wanaagsanaaday nadaafadda biyaha lagu dabaasho. Nin goobtaas isaga wiilkiisu ku dabaalanayeen ayaa wax yiri isbeddelkaas ku dhacay naadafadda biyaha lagu dabaasho:
- Waxaa hadda la dareemi karaa in biyaha iyo xeebtuba ay sidii hore ka nadiifsan yihiin.
Baaritaan uu sameeyey Machadka ka hortagga cudurada faafa waxaa laga akhrisan karaa in boqolkiiba 94 xeebihii biyahooda la baaray ay buuxiyeen heerkii la doonayey in ay nadaafaddoodu gaarto.